भदौ २० यतै मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्ने तयारी, भागब.ण्डा मिलाउन २ मन्त्रालय टु.क्रयाइँदै
नेपाल क,म्युनिस्ट पा,र्टी (ने,कपा) को वि,वाद स,माधान कार्यदलको प्र,ति,वेदनमा स,मावेश सु,झावको का,र्यन्वयन मन्त्रिपरिषद् पुर्न,गठनबाट हुने भएको छ । प्र,तिवेदनबारे आज अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा जु,टेने भएका छन् । कार्यदलले त,त्काल मन्त्रिपरिषद् पु,र्नगठन गर्ने सुझा,व दिएकोले ओली र प्रचण्ड त्यसको तयारीमा जु,ट्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार आगामी भदौ २० यता नै मन्त्रिपरिषद् पुर्न,गठनको काम सक्ने तयारीमा ओली र प्रचण्ड रहेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल भदौ २० गतेदेखि सकिँदै छ । त्यसैले पनि ओली र प्रचण्डले त्यसअघि नै नयाँ अर्थमन्त्रीसहित कम्तिमा १० नयाँ मन्त्रीहरू नियु,क्त गर्ने तयारी गरेका छन् । ओलीले पाँचैवर्ष सरकारको ने,तृत्व गर्ने भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूमा प्रचण्ड र, माधव नेपाल समूहका धेरैले स्थान पाउने भएका छन् । मन्त्रीका आ,कांक्षी धेरै भएको र भागब,ण्डाका आधारमा पनि नेपालदेखि झलनाथ खनाल समूहसम्मलाई चि,त्त बुझाउनुपर्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले २ मन्त्रालय फु,टाउने र राज्य मन्त्रीविनै मन्त्रिपरिषद् पु,र्नगठन गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दा!बी छ ।
सं:विधा,नमै २५ भन्दा बढी मन्त्री रहन नपाउने ब्यवस्था गरेको कारण ओलीलाई आ:कांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न ह,म्बे ह,म्बे परेको छ । अहिले उनको ने,तृत्वको सरकारमा उनी सहित २० मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री छन् । दुई जना मन्त्रीहरू डा. युवराज खतिवडा र वसन्त मानन्धरले भने दुई दुई वटा मन्त्रालयको कार्यभार स,म्हाल्दै आइरहेका छन् । खाली २ मन्त्रालय, २ नयाँ मन्त्रालय सिर्जना गर्ने र ६ जना २ वर्ष कार्यकार पूरा गरेका मन्त्रीलाई वि!दाई गरेर १० नयाँ नेतालाई अवसर दिइने भएको हो ।
अहिले लेखराज भट्टले सम्हा,ल्दै आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वर्षमान पुनले सम्हा,ल्दै आएको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय टु!क्राउने ओलीको तयारी छ । साथै २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका तर का!र्यसम्पादन राम्रो नभएका ६ जना मन्त्रीहरू ह!टाउने तयारी गरिएको छ । स्रोतका अनुसार उप:प्रधान तथा र,क्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, व,नमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई वि:दाइ गरिंदैछ । तर गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हटा;उने बारेमा ओली र प्रचण्डबीच कुरा बा,झिएको बुझिएको छ । पछिल्लो समय आफूलाई सहयोग गर्दै आएकोले ओली भने थापालाई निरन्तरता दिन चाहन्छन् भने प्रचण्ड भने ह;टाउन चाहन्छन् । उनको भविष्य ने!कपाको स्थायी क:मिटीले नै नि;र्धारण गर्ने भएको छ ।
नयाँ मन्त्रीमा भने हालै प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलमा रहेका अधि,कांश नेताहरू पर्ने भएका छन् । का,र्यदलमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुषालगरी चारैजनाले यसपटकको पुर्नगठनमा अवसर पाउने भएका छन् । थप नयाँ मन्त्रीमा बेदुराम भुषाल, देवेन्द्र पौडेल, अमनलाल मोदी समेतको नाम टुं,गो लागेको स्रोतले बताएको छ । बाँकी मन्त्रीहरू भने त,त्काल बस्ने भनिएको स्था,यी क,मिटीको रा,यअनुसार त,य गर्ने अध्य,क्षद्वयको तयारी छ ।